SERIE A: Kooxda AC Milan oo guuldarro kala kulantay Sampdoria…+ SAWIRRO – Gool FM
SERIE A: Kooxda AC Milan oo guuldarro kala kulantay Sampdoria…+ SAWIRRO
Haaruun February 5, 2017
(Milano) 05 Feb 2017 – Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa guuldarro 1-0 kala kulantay naadiga Sampdoria, kulan ka tirsan horyaalka Serie A oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta AC Milan ayaa laga dhaliyey goolka looga adkaaday.
Goolka madiga ah ee lagu maray Milan oo mininkeeda joogta waxa uu ahaa gool ku laad laga dhaliyey 70’daqiiqo.
Difaaca Milan ee Gabriel Paletta ayaa qalad ku galay Fabio Quagliarella oo ku jira xerada ganaaxa Milan, waxaana rigoorada loo dhigay kooxda Sampdoria gool u rogay Luis Muriel, waana goolka kaliya ee looga adkaaday kooxda ku ciyaarta San Siro.
Dhammaadkii ciyaarta kooxda AC Milan waxaa kaarka cas ka qaatay Jose Sosa, kaddib markii uu muteystay labo kaar oo kuwa digniinta ah, waxaana Milan oo lumisay saddex dhibcood kulankan ay fadhisaa kaalinta 8-aad iyadoo leh 37-dhibcood.
Guardiola oo ka hadlay sababta uu keydka uga soo tagay Aguero kulanka Swansea City
Weli ma aragtay Ciyaaryahan leh 12 packs (6 Muruq oo caloosha ah iyo 6 Muruq oo dhabarka ah)!?